Qorra halkaniifi ganamaa
Wayitiin amma keessa jirru birraadha. Wayitiin kun akka kan bara darbee hamaa ta'uu baatus keessumaa halkaniifi ganama daran diilallaa'aa jira.
Ejensii Miitiyorolojii Biyyaalessaatti ogeessi raaga haala qilleensaa, Obbo Taammiruu Kabbadaa ibsa haala qilleensaa kanarratti tibbana Bariisaaf kennaniin akka jedhanitti, duumessi, qorriifi roobni naannawawwan biyyattii tokko tokkotti mul'atu bifa idileetiin ittifufa.
Keessumaa, bakkeewwan ol ka'oon biyyattii qorraafi qilleensa gogaa kan qabaatan ta'uus ni eeru. Kutaaleen biyyattii kibbaafi kibba bahaa jechuunis gammoojjiin Naannoo Ummatoota Kibbaa gara kibbaatti, Oromiyaatti godinaaleen Gujiifi Booranaa, Naannoo Somaalee Itoophiyaa gara kibbaa wayitii itti rooba argataniidha jedhu.
Kutaaleen biyyattii kibba lixaafi lixaa rooba idileefi idileen olii argachuu akka danda'anis ogeessichi ni eeru. Kutaaleen hafan jechuunis biyyattiin gara kaabaafi jiddugalli rooba idileedhaa gadii akka argataniifi kutaalee badda tokko tokkotti qorri jiraachuu akka danda'u himu.
Qorri baranaa akka kan bara darbee cimaa akka hintaanes eeruun, iddoowwan fayyadamoo rooba wayitii kanaa ta'anitti bishaan roobaa maloota adda addaatiin cim'ifachuun malchiisaa ta'uu ibsu.
Roobni Oromiyaa lixaatti roobaa jirus hanga walakkeessa ji'a Sadaasaatti kan ittifufuu ta'uu himu. Raaga haala qilleensaa ejensicharraa kennamutti qaamoleen dhimmi ilaallatu sirnaan fayyadamuu akka qabanis gorsaniiru.
Qorri baranaa akka kan bara darbee beyladootaafi biqiltootarratti miidhaa akka hinqaqqabsiisneedha odeeffannoon ejensicha biraa argame kan ibsu. Waktii bonaatti jijjiiramoota haala qilleensaa naannawawwan biyyattii adda addaarratti dhiibbaa uuman keessaa hongeen oggaa Tiroppikaalitti jiddugalliifi kutaan bahaa garba Paasfiik garmalee ho'u uumamuufi qorra olaanaa diilallaa'uu idilee gadiitiin kan uumamu ta'uuniis himameera.
Naannawawwan biyyattii gara kaabaa Addigiraat, Aksum, Dabrabirihaaniifi Wagalaxeenaa, Fiichee, Gabragurraacha akkasumas kutaan biyyattii gara Harargee bahaafi Haromaayaan bakkewwan irra deddeebiidhaan qorraaf saaxilaman ta'uu odeeffannoon websaayitii ejensichaarraa argame ni eera.
Qorra bardheengaddaa naannawawwan kanneenitti uumameen nama, beeladaafi biqiltootarra miidhaan kan qaqqabe yoo ta'u, keessumaa gandoota 14 Aanaa Haromaayaatti argamanitti lafa hektaara kuma lama caalurraa kuduraafi jimaa guutummaatti mancaasee turuun ni yaadatama.
Ejensichatti bakka bu'aan daarektara raaga haala qilleensaafi diinina (akeekkachiisa) duraa, Obbo Asaamminawu Tashoomaa akka jedhanitti, bona dhufutti haalonni uumamuu qorraatiif mijatan hanga ammaatti hinmul'anne.
Kanaanis bararna qorri cimaan uumamamuu baatus qorri barameefi hangi tokko jiraachuu akka danda'u ibsu. Naannawa dhuma ji'a Fulbaanaarraa eegalee qilleensi gogaan, aduun, bubbee cimaan akkasumas ganamaafi galgala qorri jiraachuu akka danda'u dubbatu.
Waktii bonaatti naannawawwan biyyattii gara kibbaa, kibba lixaafi kibba bahaa jiddugalaan bokkaa milii liitira 200 hanga 450 kan argatan ta'uus bakka bu'ichi ni ibsu.
Faallaa kanaatiin kutaa biyyattii gara kaabaa dabalatee naannawawwan jiddugaleessaafi bahaa bokkaa milii liitira 100 hincaalle akka qabaatan dubbataniiru.
Ogeessonni haala qilleensaa akka jedhanitti bokkaa naannawawwan amma roobaa jiru cim'isuun akkasumas qorra iddoowwan olka'oo biyyattiitti uumame dandamachuuf maloota adda addaatti fayyadamuun misha.
Torban kana/This_Week 17542
Guyyaa mara/All_Days 1442322